“OROMIYAAN DIIGAMUUF DEEMTI”
“Tigron fi OPDn Maratan Afaan Oromo Oromumaa fi Aadda Oromoo Hunda Baleessa jiru, kun amoo Umrii Tigre Gababsee awalcha isaan gadii fageessa, Habasha sa’aa 24 Oromoo baleesuf deemu caalisan iaaluun amoo Badinsa Oromooti” Editer
Wayyaaneen har’as ta’u kaleessa, Ummatootaaf dhaabbattee hin beektu. Wayyaaneen gammoojjii Daddabiit keessatti dhalatte, gonkumaa Sagantaa mataa ishee qabaattee hin beektu. Qabaachuus hin dandeessu. Namoonni hedduun wayyaaneen waan hundaa Biyya isheetti kuufattee foxxoqixi jedhanii yaadan. Isaanis biyya ittiin dorsiisan. Garuu kana irratti gawwamu hin qabnu. Gonkumaa wayyaaneen Biyya ijaarrattee baatii jettenii hin yaadinaa .
Kan isaan yaadanii turan, Tigiraayin giddu galeessa Industirii fi madda jireenyaa taasifatanii , Naannolee biroo bakka Omisha isaanii itti harcaafatan taasisu ture. Keessattu Ummatoonni bara eeggatanii yoo nutti ka’an, amma qabannu qabannee waliin dorgomna jedhanii Qabeenyaa biyyaa saamanii Tigiraayin ijaaran. Garuu galagalchii ta’ee, waan yaadan sun ta’uu dide. Industiriin isaan yaadan sun hundumtu, humna ibsaa, Bishaan, tajaajila barbaachisu guutu waan dadhabaniif karaatti hafeera.
Humni ibsaa Takazee Tigiraayi dandamachiisuuf ijaarame, boruu Biyyoota olla Tigiraayitti dhihaataniif tajaajila jedhan, hanga har’atti Bishaan ga’aa hin argatiin jira. Sababaa kanaan warshaan sibiilaa fi masfin Injinariingi, akkasumas Masooboon naafate jira. Kana amma tokko dandamachiisuuf, humna Aduu irraa argachuuf, Dolaara biliyoonaan lakkaa’amu Faransaayif kafalanii solaarii Biyyatti keesatti hin argamnee fi humna ibsaa qilleensa irraa argamun amma tokko socha’aa jiran.
Kun ragaa akka salphaatti irraa hubannee , yaada Tigiraayi ni foxxoqxii nurraa hanqisa. Kana caalaa wanni nu amansiisu ammo Hiwaatoonni yeroo ammaa Qabeenyaan qaban eessa jira ? kan jedhudha. Kubbaaniyoonni isaanii gurguddaan eessatti dhaabbatan yoo jenne , Namni boruu cituu barbaadu qabeenyaa Biyya Namaa irratti hin kufatu nu jechisiisee shakkii keenya sana fashalsa. Kana malees, Ilmaan Tigiraayi , Tigiraayin gadhiisanii Finfinnee qofa qubatan kumoota 100n akka lakkaa’aman, kanneen hundi, manni jireenyaa rakkoo tokko malee qophaa’uufii yennaa hubannu shakkii keenya san butucha.
Inni guddaa fi yaaddoo guddaa shiraan guutame nu irratti hojjatamaa jiru yennaa hubannu , Hiwootoonni Tigiraayin adda baafachuu miti, Biyya Oromiyaa Tigiraayin taasisuuf waan nu irratti hojjatan nu hubachiisa. Shirri kunis sagantaa isaanii miti. Kan eenyuti jettu ta’a. kana har’a hin kaasu . gaafa guyyaan isaa ga’e dubbanna. Garuu har’a Ummata Oromoo irratti maaltu hojjatamaa jira ? mata duree barreeffama kanaa maalifan filadhe kan jedhutti haa ce’u. yaa Oromoo yeroo kun dhala oromoo Biyya keessaas ta’u alaaf dansaa akka hin taane hubadhaa .dubbiin akkasii…..
Wayyaaneen gaafa OPDO ijaarte, warra qooqa Oromoo beekan , garuu halgaa ta’aniin maaliif keessatti heddummeessan ? kana malees kanneen Oromoo ta’an yoo galchanis, maalif wallaalaa itti heddummeessan ? beekaa keenyawoo kan tabjaa’e maaliif filatan ? warra of gaafachuu eegalan maaliif keessaa ari’an ? gaaffii kana caalu illee kaasu dandeenya. Gaaffiileen kun garuu deebi mata duree har’aa nu dhugeessan.
Ilmaan Oromoo yeroo OPDOn hundooftuu keessa turan, har’a tokkon isaanii hin jiran. Kan keessatti hafe, Taayyee T/Hayimaanoot, Minaasee W/Giyoorgis, Warqinaa Gabayyoo , Dammallaash W/Mikaa’eel, Daanyaachoo , Muktaar , kkf tu har’a jira. Angoo jiru hundaas qabatanii jiran . warra kaan dhiifnee kanneen akka Warqinaa Gabayyoo annaan dachee Oromoon kan guddate garuu warra Kaabaa ta’uu ragaalen mul’ataa jiran.
Wayyaaneen maqaa sabootaan dhufuun warra alaa irraa deeggarsa argachuuf ta’un ifadha. Wayyaanoonni Angoon kun harkaa baanaan waan hundi akka dhumaatuuf waan beekaniif, jalqabaa kaasanii waan isaaniif ta’u hundaa gaggeeffachaa asi ga’an. Kaleessa harka qullaa dhufaa odoo jiranii akkaataa itti ango kana of harka turfatan yaadaa turan. Har’a ammo qabeenyaan hundumtu isaan harka waan jiruuf , Angoo gadhiisuu jechuun of ajjeesutti akka fudhatan beekamaadha.
Kanaaf mirgoota sabootaa sharafanii ofii dhaaluun itti fuftee jirti. Ilmaan Tigiraayi qooqa sabootaa barsiisanii , keessattu Yunivarsitii maqalee keessatti dippaartimantii Afaan Oromoo banatanii Ijoollee Tigiree Oromiyaa borii bulchuuf deeman ummachuu isaanii wayita hubannu, hangam duubatti harkifamaa akka jirru nu argisiisa.
Wayyaanoonni har’a , sirna Fedaraalizimii jiru gara Ahaadaawwitti deebisuuf karaa eegalte walakkaan geesse jirti. Maqaa Investimantiin lafa kan gurguru Fedaraala ta’eera. Kana jechuun maal jechuu akka ta’e namaaf gala. Humni poolisaa fi Tikaa Naannoolee hundi Fedaraala jala galanii jiran .Waajjiraaleen hundi ajaja Fedaraalaan bulu ega eegalanii bubbulanii jiran. Oromiyaa fi Tigiraayi irraa kan hafe, Naannooleen hundi Afaan Amaaraan hojii gaggeessan. Carraan kun Oromiyaa keessatti ega eegalamee har’a bubbuleera.
Bara 2004 miseensoonni OPDO saboota keessaa ta’uu ni dabalata gaafa jedhamu, maal jechuu akka ta’ee bara sana ibsinee nama nu dhaga’u dhabne. Wayyaaneen sabboonummaan sabootaa dabalaa jiraa, kun ammo Biyyattiif hin tolu jettee, waan hundaa tu’achaa jiraachuu yennaa dubbannus , nama nu dhaga’u hin arganne. Har’a garuu waan hundi ifatti mul’achuu eegaleera.
Oromiyaa keesstti Afaan oromoo waraqaa irratti ega hafee bubbulee jira. Oromiyaa keessatti Afaan Oromoo fardeessun dhiphummaatti ilaalamutti aane kan dhufe, waajjiraaleen gara sanatti dhiibamudha. Tiyaatiroota fi Diraamaalee akksumas Sirboota Afaan Amaaraa Oromiyaatti gadi lakkisuun, Ummata qalbii hatuu ega eegalanii turanii jiru. Waajjiraaleen hundi ijoollee halagaan ega qabsiifamanii bubbulanii jiru. Har’a BUUFATII TELEVIZHINII FI RAADIYOON Oromiyaa ilmaan saba biroon guutamee , Afaan oromoo rakkoo seenee jira. Inumaayyuu TV Oromiyaa isuma jedhuyyuu dhabamsiisuuf hojjatamaa jiraachuu argaa jirra.
TV Oromiyaa keessa wiirtu WAALATAA galchuun , suuta suuta Ummata Oromoo Afaan Amaaraa akk fudhatuuf diraamaa ummata hawwatan karaa sana akka tamsa’uuf shirri hojjatamuu eegaleera. Ijoollee gaaffii kaasan illee keessaa ega ari’anii yeroo fudhateera. Tekinishiyaanoonni keessa jiran hundi, warri har’a Afaan Oromoon Oduu dubbisan odoo hin hafnee saboota fagoo fi Tigiraayin guutamee, Afaan Oromoo akka gadi deemee Ummati jibbu taasifamaa jira.
Afaan Oromoo akka hin guddanneef , aadaan OROMOO akka hin guddanneef, sabbonummaan Oromoo akka hin dagaagneef, shirri wayyaaneen akka raawwachiisaatti gaggeessitu haalaan gaggeeffamaa jira. Wayyaanee Ihaadeeg, wal ga’ii isaa Hawaasaatti gaggeeffate irratti , sirna Ahaadaawwitti akka deeman , kunis sabboonummaa Ummatootaa keessattu kan Ummata Oromoo dabalaa jiraachuu ifatti himanii jiran.sabboonummaan dabalu jechuun Biyyaaf yaaddeesaa ta’utti lallabaniiru. Humnoonni alaas waan kana ni fudhatan.
Wayyaanoonni dhaloota borii illee karaa irraa maqisuuf , waan aadaa isaanii odoo hin taane, waan alaa akka fardeessan, sirbootaa fi aadaa warra alaan akka mo’aniif , sagantaalee TVn waan ijoolleef dhihaatu irraa hubachuun ni ga’a. aadaa ummatootaa ega dhabsisanii bubbulaniiru. Caasaan kominikeeshiinii Obbo Brakatiin dirirfamee Naannoolee hundaa keessa jiru, Naannooleen ajaja itti kennuu hin danda’an . sududaan Obbo Barakattu ajaja. Caasaan kanneen fakkaatan hedduudha. Caasaan Ahaadaawwii walakkaan xumuramee jira.
Caalaatti ifa taasisuuf , Humni waraanaa duraanu Fedaraala harka jira. Humni poolisa Naannolee kan Fedaraalaa jala jira . Humni Tikaa Naannoolee harkaa maqaa Ashabbaarii adamsuu jedhuun harkaa ba’eera . Lafti heektaara kuma 10 ol fedaraalaatu Investarootaaf gurgura. Albuudaa fi Qabeenyaa Umamaa hundaa Fedaraalatu kennaa jira. Kubbaaniyoota hundaa Fedaraalaatu Bulcha. Waajjiraaleen Naannoolee irra jireessi Afaan Amaaran hojjatu. Kun ammo oromiyaa keessatti hidda yaafatee jira. TV ITOOPHIYAA KEESSAA Afaan Oromoo ari’anii , TV OROMIYAA keessa AFAAN amaaraa heddumiinaan akka seenu taasifamaa jira. Dhuma irratti TV Oromiyaa chaanaalii xixiqqaatti galchanii, kan Oromiyaa ITOOPHIYAATTI geeddaruf hojjatama jira. Maarree Ahaadaawwiin isa kana miti ? kun ammo kan dhugoomu caasaa addaa Obbo Barakatiin durfamuun ta’uu hubachuu barbaachisa.
Sirna sabboonummaa Ummatootaa Ukkaamsuuf gadi dhaabbatuuf deemu irra jireessa , gama sirbaan hojjatamaa jira. Ummatoonni hundi Ol-aantuummaa Afaan Amaaraa akka fudhatuuf , Industirii Muuziqaa tu’atnii kanneen hojjataa jiran gaaf tokko eenyummaan isaani saaxilamun hin haftu. Jarri kun sirboonni sabootaa akka ol hin kaaneef, hin gurguramnee fi carraa hojjatamu akka hin arganneef, saboonni mana muuziqaa akka hin qabaanne gochuu eegalee shiroonni hojjataa jiran kana kan jedhamu miti.
Abbootiin aadaa odoo jiranii , Finfinnee ba’anii baadiyyaatti bu’anii Durgoo kumootaan kaffaalamaafii warrii hojjatan, Ummatichaaf naato tokkollee hin qaban. Akka duulaatti hajajamanii hojjachaa jiran. Caasaan Obbo Barakatifaa shiroota kana hundaa akka raawwataniif , dirqama kan kennaniif dhiiga isaanii kan ta’aniif qofaadha. Sirbi isaan shiraaf baasanii odoo hin gurguramne TV itoophiyaa irratti rakkoo tokko malee dhihaata. Artiistii beekamaa jedhamee QOPHII ARHIIBU irratti rakkoo tokko malee dhihaata. Silaas Gaazexessitoonni sabootaa ari’amani, kanneen bakka qabatanii AFAAN isaaniifu keessummaa ta’een kanneen hojjatn , deeggarsa addaa taasifamufiidha.
Haala kana gadi fageenyaan kan ifatti baasuuf yaallu fagoo hin ta’u . garuu wanni saba keenya irratti hojjatama jiru heddu nama gaddisisa. Sirna Ahaadaawwiin gaggeeffamu kun , harka dheeraa wayyaaneen dhaabbilee mormitootaa keessatti illee seenaa jiraachuu yaadu qabdan. Kanas bal’inaan itti deebina.
Gama biroon wayyaanef gaaffii Ummatootaa ukkaamsuuf, humnoota alaa dantaan qabdee shira isheen hojjachaa irtu akka salphaati kan ilaalamu miti. Humnoonni alaa kubbaaniyyaa fi industiriilee akka qabaatan taasisuun, jireenya isaaniif wayyaanee jiraachiisuu akka qabanitti, kana malees jarri kun dantaa isaaniif jedhanii miidhaa Ummatootaatti akka callisaniif shirri hojjattu salphaa miti. Kanaafidha warri alaa kun, ummati 192 guyyaa saafaa Asfaalti irratti yennaa ajjeefamu kan callisaniif. Kanaaf falli jiru isaanin mataa isaanii falmanii akka nama dhaga’an taasisu qofaadha .
MAAL NU WAYYAREE ?????????????
Ummati Oromoo adeemsa isaaf hedduu yaaddeessaa ta’e kana duraa dhaabbachuuf qabsaa’uu qaba. Keessattu , Qeerroon Oromoo diina raasaa jiru kana mormuu qaba. Keessattu TV oromiyaa keessatti waan hojjatamaa jiru mormuu qaban . Waajjiraalee Oromiyaa keessattiwaan hojjatamaa jiru mormuu qaban.dhiibaa Afaan Oromoo irratti taasifamaa jiru mormuu qaban. Afaan Oromoo babal’isuu irra, Afaan Amaaraaf yeroo bal’aa laatamu kana mormu qaban. Sagantaalee Ummata keenyaaf faayidaa tokkolle hin laanne, dhaloota har’aa doomsaa jiru mormu qaban. Diraamaalee Oromiyaa keessatti ta’e jedhamanii argisifamaa jiran mormu qaban. Dhorkuu qaban. TV oromiyaa keessatti AFAAN OROMOO waan beekuuf qofaa , ijoollee Oromoo kan ariisiu , OPDOn eenyu musaa jedhamu shira wayyaanee kanaaf bu’aa ol aanaa buusaa jira.
Hojjattoonni shira waajjiraalee keessatti raawwatamaa jiran mormutu irraa eegama. Kun ta’uu baannaan Gaaffiin OROMIYAA caalaattu dhabamuuf deema yaa firaa. Kanaafan OROMIYAAN DIIGAMUUF DEEMTI JEDHE.